तपाईं डिज्नी स्टूडियो बाट कार्टूनहरू मनपर्छ? र तपाइँ डिज्नी राजकुमारीहरू कसरी प्रसिद्ध हुनुहुन्छ? चलो, तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुन्न। यी दयालु कथाहरूमा, निष्कपट र वास्तविक लडकियां पूरै पीढी बढ्यो। र नयाँ कार्टूनहरू "दुर्लभ" न त थोरै कथाहरूमा छन्, न त ग्राफिक्समा।
अब मलाई भन्नुहोस्, के तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाइँ आफ्नो मनपर्ने नायिकाको बारे सबै कुरा थाहा छ? हामी, उदाहरणका लागि, बहस गर्न तयार छ कि राजकुमारीहरूसँग केही रहस्यहरू छन् जुन सबैभन्दा समर्पित प्रशंसकहरूलाई झटकाउन। के हामी जाँच गर्नेछौं?
1. 1 99 8 मा, लिटिल मरमेड एरिरी एक लामो 30-वर्षीय हाईटस पछि पहिलो राजकुमारी हुनुभयो। त्यसअघि, डिज्नीले 1959मा विश्वको नायिका अरोरा (सुत्ने सुन्दरता) को प्रतिनिधित्व गरे।
2. हामी सबैलाई थाहा छ, कार्टूनको "बेल्जियम र जनावर" बेल्जियम परिवारको एकमात्र बच्चा थियो, तर वास्तवमा केटीले बहिनीलाई क्लासासा भनिन्छ। सही, यस क्यारेक्टरको अन्तिम संस्करणसम्म "लाइभ" थिएन, र यसलाई काट्न निर्णय भयो।
3. लिंडा लर्किन - जो अभिनेत्री ज्यास्मीन आवाज उठ्यो - लगभग निकालिएको थियो। निर्देशक-जनरल जेफ्रे कटज्जबर्गलाई, उनको आवाज "भव्य" जस्तो लागेन। सौभाग्य देखि, लंडा उनको पछि उनको स्थान राखन को लागि प्रबंधित।
4. "डिज्नी" मा तिनीहरू परी कथाहरू, किंवदंतियों र शास्त्रीय साहित्यबाट प्रेरणा आकर्षित गर्न मनपर्छ। तर "Braveheart" स्टूडियोबाट मेरिडूले सिर्जना गरेका छन्, जुन अहिले उनी भन्छन्, "खण्डबाट।"
5. रापुन्जेल धेरै लामो कपाल छ - सबैले यो जान्दछन्। तर के तपाईंलाई थाहा छ कि यसको बिरुद्धको लम्बाइ 21 मिटर सम्म पुग्छ? केवल कल्पना गर्नुहोस् कि गरिब मानिसले आफ्नो गर्दनलाई रोक्न कत्तिको छ, त्यस्तो झटका लगाउने!
6. एरियल - डिज्नी कार्टून को सबै भन्दा गायन राजकुमारी। र यो किनभने यो एक मत्स्यांगना हो, पानी अन्तर्गत बस्छ!
7. अन्ना "शीत हार्ट" बाट खरानीसँग गाईयो। यद्यपि, त्यस क्षणमा राजकुमारी थाहा थिएन कि वास्तव मा उनको युगल उनको साथ मिल्यो। र यो देखिन्छ, यो एक योग्य बहाना हो।
8. सिन्डेलाले 37.5 जूताहरू थिए। यसबाहेक, उनी धेरै पतला थिए। यो कुनै आश्चर्य छ कि उनको बहिनीहरु उनको जूता मा फिट थिएन - त्यो एक सुरुचिपूर्ण पैर को लागि डिजाइन गरिएको थियो।
9। स्नो व्हाइटको बारेमा कार्टून एक पागल सफलता थियो। आफ्नो वाल्ट डिज्नीको रिलीज पछि पनि एक अग्नि बनाउन सोचे। तर अन्तमा, "स्नो व्हाइटको रिटर्न" छोडेर निर्णय गरियो।
10. अन्ना अभिनय गर्ने आवाज माथि चार विभिन्न अभिनेत्रीहरू: लाइभाइ स्टुब्नेराह, क्याथी लोपेज, अगाथा ली मोन र क्रिस्टीन बेल काम गरे।
उनीहरुसँगको सम्बन्धमा उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ।
12. प्रारम्भमा, जस्मा बुडुलबुडुरलाई बोल्न चाहियो - यो "हजुरआ र एक नाइट्स" पुस्तकबाट राजकुमारीको प्रोटोटाइपको नाम हो।
13. "डिज्नी" प्रेममा एकअर्कासँग विभिन्न कार्टूनहरूको क्यारेक्टर जडान गर्न मनपर्छ। लिनुहोस्, उदाहरणका लागि, एरियल र हर्कोलिज। के तपाईंलाई थाहा छ कि तिनीहरू सम्बन्धित छन्? र त्यसो छ। हामी जडान गर्न प्रयास गरौं: लिटिल मरमेड ट्राइटनको छोरी हो, टिटोन पोसीडोनको पुत्र हो, पोजिडोन ज्यूउसको भाइ हो, ज्यूस हरक्यूलेसको पिता हो। बिंगो!
14. बेोनस "राजकुमारी र माढक" कार्टुनमा टायानाको आवाज गर्न इन्कार गरे, र उनको स्थान अन्िका नून गुलाब आयो। अन्य दावेदारहरू अल्सासा किज, टाइरा बैंकहरू, जेनिफर हडसन पनि थिए।
उहााले भनेकी थिइन्।
16. ग्रीक टियानाबाट अनुवादमा "राजकुमारी"।
17. अन्ना मात्र खलनायक संग गाईयो, र जास्सिन गए र यसलाई चुम्बन गर्यो!
18. कार्टुन "निद्राको सुन्दरता" व्यावहारिक रूपमा असफल भएको छ, किनकि राजकुमारी अरोरा उनको "सहकर्मीहरू" को सबै भन्दा अयोग्य मानिन्छ।
1 9। सामान्यतया, डिज्नी राजकुमारहरू धेरै शान्त छन् र कसैलाई मार्न सक्दैनन्। मुलन अपवाद थियो। धेरै मानिस उनको हातबाट मरे। 1995 मानिसहरू, सटीक हुन।
20. बेल एक ओस्कार प्राप्त गर्न पहिलो डिज्नी राजकुमारी हो।
Beyonce आफ्नै मन्दिर छ
फैशनको 20 पीडितहरु, जुन बचत गर्न समय हो, यो निकै ढिलो भएको छैन!
वास्तविक अनुहार डिज्नी नायिकाहरू: 14 अद्भुत कथाहरू
र यो 1992 मा भयो।
जैकी हाउंग द्वारा दृष्टान्तहरुमा पुनर्जीवित कहानियां
42 द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा अविश्वसनीय तथ्यहरू
25 हास्यास्पद र अचम्मलाग्दो संयोग, जुन विश्वास गर्न असम्भव छ!
Skazochke अन्त: डिज्नीको क्यारेक्टरहरूको साथ यी चौंकाने दृष्टान्तहरूले हाम्रो बचपनलाई नष्ट गर्नेछ!
11 महिला वैज्ञानिकहरूले यस संसारलाई परिवर्तन गरेका छन्
स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा 37 खतरनाक व्यवसाय
40 वर्षपछि फोटोग्राफरले "पुनर्मिलन" को लागि फोटोको नायक फेला पारेको छ।
20 वटा तस्बिरहरूको प्रमाण छ जसमा तपाईंले भर्खरै विश्वास गर्नुभएन
यी 20 मानिसहरू धेरै अजीब परिस्थितिहरूमा मरे
14 मानिस, जसको तेजता "काम गर्नु पर्छ"
20 वटा साधारण भाषाहरू जुन तपाईंले2खाताहरूमा सिक्न सक्नुहुनेछ!
इक्वाडोर - रोचक तथ्यहरू
Abulia - उपचारको कारणहरू र तरिकाहरू
काठको स्टालहरू आफ्नै हातले
नवजात मा हिचकी
Whiskas बाट एक कुखुरा क्यान्सर कसरि?
महिलाको सर्दिया जूता एडिडास
रचनात्मक आलोचनाको लागि नियम
एलर्जीलाई ठुलो पार्छ
एक स्वस्थ जीवन शैली को अवयव
युद्धको बारेमा बच्चाहरु को चलचित्रहरु
दाहिने साइड दुखाइमा आउँदैछ
प्याज रङहरू कसरी बनाउने?
बिल्लियों को लागि पोशाक
संसारको 10 भन्दा धेरै प्रसिद्ध ट्रान्जिन्डर
पर्ल पुष्प - नुस्खा
केक पकाउने कसरी?